Có nên cho trẻ uống sữa tăng chiều cao? Trẻ bao nhiều tuổi thì uống? | Muasalebang - Muasalebang
Có nên cho trẻ uống sữa tăng chiều cao? Trẻ bao nhiều tuổi thì uống? | Muasalebang
Đang Đọc: Có nên cho trẻ uống sữa tăng chiều cao? Trẻ bao nhiều tuổi thì uống? | Muasalebang in Muasalebang
Ingabe izingane kufanele ziphuze ubisi ukuze zikhulise ubude? azizona? Ingabe ubisi lwefomula lusiza izingane ukuba zikhule zibe zinde? Lolu wudaba abazali abaningi abakhathazeke ngalo.
Ngoba ukuphakama kuthinta kakhulu ikusasa lomntwana. Ngaphezu kokuzivocavoca kwansuku zonke, ukugcwalisa ubisi lwezingane kusukela eminyakeni yokuqala yokuphila kuyindlela yokwandisa ubude omama abaningi abasebenzisayo. Ngakho ingabe lokhu kusebenza ngempela? Ake siphendule le nkinga esihlokweni esingezansi!
1 1. Izinto ezithinta ubude bengane
1.1 Izici zofuzo
1.2 Ukudla okunomsoco
1.3 Ukuzijwayeza kwezemidlalo
1.4 Indawo yokuhlala
2 2. Ubude bengane obujwayelekile
3 3. Ingabe izingane kufanele ziphuze ubisi ukuze zikhulise ubude? Ingabe ukuphuza ubisi ukwandisa ubude kuyaphumelela?
4 4. Izinto okufanele uzazi uma uphuza ubisi ukwandisa ubude bezingane
4.1 Izingane kufanele ziphuze nini ubisi ukuze zikhulise ubude? Inini ephumelela kakhulu?
4.2 Zingakanani izingane okufanele ziphuze ubisi ukuze zikhulise ubude?
5 5. Indlela yokukhetha ubisi ukuthuthukisa ukuphakama kwezingane?
5.1 Ubisi ukwandisa ubude obufanele ubudala nesisindo
5.2 Ifanele isimo sempilo yengane
5.3 Khetha ubisi olungenazo izithako ezingezwani nengane yakho
5.4 Amaphesenti amaprotheni ezithako zobisi
5.5 Izithako obisini lwefomula
5.6 Umbala wefomula yengane
5.7 Inani? Ingabe izingane kufanele ziphuze ubisi ukuze zikhulise ukuphakama kwasekhaya?
1. Izinto ezithinta ubude bengane
Iningi lezingane zaseVietnam ngesikhathi sokuzalwa zinobude obufana nobezingane emazweni amaningi emhlabeni jikelele (cishe ama-50cm). Kodwa-ke, kusukela eminyakeni emi-3 kuya phezulu, ukuphakama kwezingane eVietnam kuhlukile futhi kungemuva kakhulu kwezingane zakwamanye amazwe amaningi.
Abazali baphinde bakhathazeke ngobude bezingane zabo ekubeni zingemude njengontanga yabo. Ngakho yini imbangela yomehluko wokuphakama?
Ngokusho kongoti bokudla okunempilo, kunezici eziyisi-7 ezithinta ngqo ukukhula kobude bengane.
Ifa elivela kubazali linquma cishe u-23% wobude bengane. Abazali abaningi bade, izingane zabo zizoba zinde esikhathini esizayo futhi ngokuphambene nalokho.
Abazali bangathembela kufomula elandelayo ukubala ubude bengane yabo:
Ubude bendodana = ((ubude bukamama + 15cm) + ubude bukababa) / 2)
Ubude bendodakazi = ((ubude bukababa – 15cm) + ubude bukamama) / 2)
Nokho, le fomula iyalinganiselwa kuphela. Eqinisweni, miningi imindeni enabazali abafushane ngobude, kodwa izingane zabo zisezinde.
Lokhu kungase kube ngenxa yokuthi izihlobo zisenezakhi zofuzo eziphakeme noma ngenxa yokuthi abazali bayakwazi ukunakekela izithasiselo zokudla okunomsoco, indawo yokuhlala, ukuqeqeshwa kwezemidlalo, nemisebenzi yesayensi. Ngakho-ke bobaba nomama abanobude obulinganiselwe, ningakhathazeki kakhulu!
Ukudla okunomsoco kuthinta u-32% wobude bomuntu. Ukwengeza ngemisoco eyanele kuzosiza izingane zibe nobude obufanele. Ezinganeni ezincane, uma ufuna ukuthi amathambo engane yakho aqine, ungakhohlwa ukufaka uvithamini D, i-iron, i-zinc ne-calcium ekudleni kwengane yakho kwansuku zonke.
Ngaphezu kwalokho, ukudla kufanele kufane nesigaba sokukhula komntwana. Uma kuncane kakhulu, izingane zizoba mfushane, zibe nesisindo esincane futhi zingondlekile. Kodwa okuningi kuzodala ukukhuluphala.
Ukudla kwesayensi kwengane yakho kudinga ukuhlinzeka ngamaqembu ama-4 anele ezinto: amaprotheni (okubalwa ku-10-15% wamandla ewonke), isitashi (esibalelwa ku-60-65% wawo wonke amandla), amafutha (okubalwa ku-10% wawo wonke amandla. )) kanye nemifino. Ungadli noma yini kakhulu, ngaphandle kwebhalansi.
Ngaphezu kwalokho, omama kufanele bagcwalise izingane zabo ngokudla okuphansi kobisi okuqukethe amaprotheni, i-calcium, i-magnesium, i-phosphorus; Inyama engenamafutha, izinkukhu, inhlanzi, ubhontshisi namantongomane kuqukethe insimbi eningi, i-zinc kanye novithamini B. Konke lokhu kuyimisoco ebalulekile yokuqinisekisa ukukhula nokukhula kwengane yakho.
Abazali kufanele bakhuthaze izingane zabo ukuba zivocavoce, zinyakaze futhi zizivocavoce nsuku zonke. Ngezingane, omama bangakwazi ukuqondisa izingane zabo ukuba zenze ukunyakaza okulula njengokwelula imilenze yabo, ukuma nokuhlala phansi … Lokhu kunyakaza kuvuselela ukuqina, ukuqina nokuthuthukiswa kwesistimu yamathambo.
Lapho umntwana engena esigabeni seminyaka engu-5-6 ubudala, umama kufanele avumele ingane ukuba idlale imidlalo ethile efana nebhola lomnqakiswano, ukubhukuda, intambo yokweqa … ukuze ikhule kahle.
Ukuzivocavoca kufanele kwenzeke njalo futhi ugcine isimiso. Izingane kufanele zikhuthale futhi zizivocavoce okungenani imizuzu engama-30 nsuku zonke.
Indawo yokuhlala nayo ithinta ubude besikhathi esizayo bomntwana. Indawo okuhlala kuyo ehlanzekile, engangcoli, amanzi ahlanzekile, nokudla okuphephile kuyovikela impilo yengane yakho, igweme ukugula, futhi ibe namathuba amaningi okukhula okuphelele kusukela ekuphakameni kuye esisindweni kanye nasekuhlakanipheni.
Ucwaningo oluningi lwesayensi lufakazela ukuthi, lapho izingane zilala kahle, zilala ngokujulile, umzimba ukhiqiza i-hormone yokukhula, ukuphakama okukhulayo. Omama kufanele balalise ingane kusukela ngo-9:00, kusukela ngo-10 ntambama kuya ku-3 ekuseni yisikhathi lapho umzimba ukhipha i-hormone yokukhula ephakeme kakhulu, evuselela amathambo amade.
Ngokuvamile, abafana bazoba ngamasentimitha ambalwa ubude kunamantombazane. Amantombazane azokhula ngaphambi nje kokuthomba. Ngaleso sikhathi, abafana bazokhula kahle ngasekupheleni kokuthomba. Lo mehluko uzonikeza abafana iminyaka emi-2 eyengeziwe ukuze bajabulele isikhathi esijwayelekile sezingane ngaphambi kokungena ngokusemthethweni esigabeni sokukhula.
Ngaphandle kwalokho, ukungena ekuthombeni, umjikelezo wokuya esikhathini wamantombazane uzovimbela ukukhula kobude. Lesi yisizathu esenza ukuthi abafana bavame ukuphakama ngo-15 cm kunamantombazane lapho sebekhulile.
Izingane ezinezifo noma izifo ezingapheli zizothinta ubude bazo. Uma kubhekwa isikhathi eside, kuzotholakala ukuthi ukuphakama kwezingane ezithintekile kuzoba ngu-10% noma ngaphezulu kunezingane ezinomzimba ojwayelekile kuye ngokuthi ubudala.
2. Ubude bengane obujwayelekile
Njengamanje, ithebula elijwayelekile lobude nesisindo somntwana elishicilelwe yi-WHO lingenye yolwazi oluthembeke kakhulu kubazali ohlelweni lokunakekela nokukhulisa izingane. Ikakhulukazi, phakathi neminyaka eyi-10 yokuqala yokuphila, ubude nesisindo somntwana kufanele kubhekwe futhi kuqashelwe eduze kakhulu.
3. Ingabe izingane kufanele ziphuze ubisi ukuze zikhulise ubude? Ingabe ukuphuza ubisi ukwandisa ubude kuyaphumelela?
Imigqa eminingi yobisi okwamanje emakethe yengezwe ngezithako ezifana namaprotheni, uvithamini A, uvithamini D kanye ne-calcium, i-phosphorus kanye ne-iodine… Lezi zakhi zomsoco zihileleke ngokuqondile ekuthuthukisweni. ukukhula kukho kokubili ubude nesisindo.
Eqinisweni, ingxenye yokudla, amandla omntwana ahlukile. Isengezo sokudla okunomsoco wezingane ezinesifiso esincane akwanele ukuze umzimba uthuthuke. Ngakho-ke, ukwengeza ubisi ukwandisa ukuphakama ukunikeza imisoco elahlekile yomntwana kuyadingeka.
Ucwaningo oluningi olwenziwe ngongoti luqinisekisa ukuthi ukuphuza ubisi nsuku zonke kuzonyusa ukuminyana kwamaminerali namangqamuzana akha amathambo, kunciphise amangqamuzana abulala amathambo, futhi kusize amathambo namalunga ukuthi abe nempilo futhi athambekele.
Kodwa-ke, umzimba ungamunca kuphela i-2/3 yokuqukethwe kwe-calcium obisini, i-1/3 esele ikhishwa nge-excretory system. Ngaphandle kwalokho, izingane eziningi azizwani ne-lactose obisini. Uma izingane zingezwani nezinto ezithile, zizoba nezimpawu ezithinta amandla azo okumunca imisoco. Lokho kuthinta inani lemisoco edingekayo ekukhuleni.
Ngakho-ke ngombuzo wokuthi ukuphuza ubisi ukwandisa ukuphakama noma ukuphuza ubisi ukwandisa ukuphakama, ingabe kuyaphumelela? bese impendulo ithi YEBO. Ukuphuza ubisi olunokuqukethwe okuphezulu kwe-calcium, amavithamini namaminerali kuzothinta kahle ukukhula kobude bomntwana.
Kodwa abazali akufanele babeke okulindelekile futhi bathembele kakhulu obisini. Ngaphezu kokuphuza ubisi, ukudla kwengane nemisebenzi yansuku zonke kufanele futhi kulungiswe ngendlela efanele.
Ikakhulukazi, omama kufanele banake ukwakheka kobisi ukuze baqiniseke ukuthi izingane zabo azizwani ne-lactose. Uma ingane yakho ine-allergies, kufanele uyeke ukusebenzisa ubisi esikhundleni salo ngobisi ngaphandle kwalesi sithako!
4. Izinto okufanele uzazi uma uphuza ubisi ukwandisa ubude bezingane
Izingane kufanele ziphuze nini ubisi ukuze zikhulise ubude? Inini ephumelela kakhulu?
Nakuba ubisi lusiza izingane ukuba zikhule zibe zinde, azikwazi ukuluphuza ngaso sonke isikhathi. Abazali kufanele baqaphele isikhathi sokuba izingane ziphuze ukuze zisebenzise izinzuzo zobisi ngokuphakama kwengane. Ngokuqondile:
Ungaluphuzi ubisi cishe izikhathi ezintathu zokudla okuyinhloko: Ukudla okuyinhloko kuvame ukuqukatha izitsha eziqukethe imisoco eminingi emihle yomzimba. Ukuphuza ubisi ngalesi sikhathi kuzokwenza ingane igcwale futhi ingakwazi ukudla ngesikhathi sokudla okuyinhloko.
Abazali kufanele baphuzise izingane ekuseni noma ebusuku ngaphambi kokuba ziyolala. Ekuseni, ngemva kokuba ingane idle ukudla kwasekuseni bese iphuza ubisi, izohlinzeka ngemisoco edingekayo namandla emzimbeni wengane ngosuku olude lokufunda nokudlala.
Uma uphuza ubisi ebusuku, kufanele uvumele ingane yakho iphuze amahora angu-2 ngaphambi kokulala. Ngale ndlela, umzimba uzothatha imisoco ephezulu. Ngaphezu kwalokho, lesi futhi isikhathi lapho umzimba uthatha i-calcium ephezulu, usize izingane zilale zijule futhi zikhulise ukuphakama ngokuphumelelayo.
Zingakanani izingane okufanele ziphuze ubisi ukuze zikhulise ubude?
Ngaphambi kombuzo wokuthi izingane kufanele ziphuze ubisi ukuze zikhulise ukuphakama, izingane kufanele ziphuze ubisi zineminyaka emingaki? Ongoti kanye nezazi zokudla bonke bayavumelana ngokuthi izingane ezingaphansi kwezinyanga eziyisi-6 kufanele zinceliswe ibele lodwa. Ngakho-ke, ukwengeza ubisi ukwandisa ubude bengane, omama kufanele balusebenzise kusukela ezinyangeni eziyisi-6 kuya phambili.
Isikali ubisi ukuthuthukisa ukuphakama izingane
Izingane ezinezinyanga eziyisi-6 kuya kowonyaka ubudala zidinga ama-700-950 ml wobisi ngosuku.
Izingane ezineminyaka engu-1-2 ubudala ziphuza ubisi lwama-500-600ml ngosuku.
Izingane ezineminyaka engu-2-6 ubudala kufanele zibe nama-400-600ml wobisi ngosuku.
Izingane ezineminyaka engu-6-9 ubudala zidinga 400-500ml ngosuku.
Ngaphandle kwalokho, umama waphawula ukuthi akukuhle ukuphuza ubisi oluningi, i-calcium supplementation ngobisi iyasebenza. Ngokusho kukaProfesa Ohlangene, uDokotela, uDokotela uLe Bach Mai uthe: “Ubisi luba ‘ithuluzi’ eliwusizo kuphela lokusiza izingane zifinyelele ukuphakama kwazo ezingase zibe khona ngaphezu kokudla okunomsoco, ukuvikelwa kwezempilo kanye nempilo enhle. Isikhathi esifanele sokuzivocavoca kanye nemidlalo “.
Abazali kufanele banake izingane zabo ukwenza imisebenzi ehambisanayo ukuthuthukisa ubude obusebenza kahle kakhulu:
Vumela ingane yakho ilale amahora angu-8-10 ngosuku. Kusukela ngo-10:00 kuya ku-2:00 isikhathi “esagolide” sokukhula kobude, ngakho abazali kufanele balalise izingane zabo ngaphambi kuka-10pm.
Khuthaza izingane ukuthi zinyakaze imizimba yazo njalo ngokwenza izivivinyo zokuthuthukisa ubude njengokubhukuda, intambo yokugxuma, i-volleyball, ukushwiba…
Landela ukudla kwesayensi, engeza imisoco eyanele esidlweni ngasinye.
5. Indlela yokukhetha ubisi ukuthuthukisa ukuphakama kwezingane?
Ukukhetha umkhiqizo omuhle, ukusekela ngokuphumelelayo ukuthuthukiswa kobude bezingane, omama kufanele babhekisele kwezinye izindlela ezingezansi:
Ubisi ukwandisa ubude obufanele ubudala nesisindo
Imikhiqizo ikhomba ngokucacile iminyaka lapho izingane zingasebenzisa khona ubisi: ubisi olukhulisa ukuphakama kwezingane izinyanga ezingu-6-12, ifomula ekhulayo yezingane ezineminyaka engu-1 ubudala, ubisi lwaseJapane okwandisa ukuphakama kwezingane ezineminyaka engu-3 ubudala, njll. .
Ifanele isimo sempilo yengane
Ubude nomzimba kuhlale kuthuthuka ngokuhambisana. Ngakho-ke, lapho ukhetha ubisi ukwandisa ukuphakama, omama nabo badinga ukunaka ubisi olungasiza izingane ukuba zithole isisindo sokuthuthukiswa okuphelele.
Khetha ubisi olungenazo izithako ezingezwani nengane yakho
Kunamabisi ambalwa emakethe anobisi oluyisipesheli oluphephile ukuthi lusetshenziswe izingane ngaphandle kokungezwani komzimba nezinto ezithile. Kodwa-ke, kungcono ukuthi abazali baqaphe cishe izinyanga ezi-2 ngemuva kokuphuza ukuze babone ukuthi ingane inezinduna, isifo sohudo, ukuqunjelwa?
Amaphesenti amaprotheni ezithako zobisi
Uma iphesenti lamaprotheni obisi linganele, lizobangela ukuthi umntwana angondleki, aphuze ukukhula, futhi abe namasosha omzimba abuthakathaka. Ngokuphambene nalokho, uma ubisi lunamaprotheni amaningi, luzodala ukuphazamiseka kwe-hormone, ukukhuluphala, kanye nezifo zenhliziyo.
Isilinganiso esijwayelekile samaprotheni wezingane ngokwesigaba ngasinye sokukhula sizoba:
Izingane ezineminyaka engu-0-12 izinyanga, isilinganiso amaprotheni ejwayelekile mayelana 11-18%.
Izingane ezisukela ezinyangeni eziyi-12 kuye kwezingama-36, isilinganiso samaprotheni singama-18-34%
Izithako obisini lwefomula
Izithako ezidingekayo obisini ukwandisa ubude bezingane yilezi:
I-calcium: iqinisa amazinyo namathambo
I-ayoni: iqinisa amasosha omzimba. Izingane ezintula insimbi zivame ukungondleki kahle, ukugula, ukukhula kancane, noma ukukhathala.
Amavithamini namaminerali (kufanele abe ne-Vitamin A nezinye izinhlobo zeVithamini B, Vitamin C, Vitamin D)
I-DHA, i-ARA, i-Beta-Glucan,… yeseka amasosha omzimba wengane yakho nokuthuthukiswa kobuchopho
Amaprotheni: asiza ukukhulisa ukuphakama ngokwakha izicubu ezithile
Umbala wefomula yengane
Uma umama ekhetha ubisi lwengane, naka umbala womkhiqizo. Imigqa yobisi lwekhwalithi enhle, ubisi lwempushana olukhanyayo oluphuzi, olukhanyayo, iphunga elimnandi lapho ukunambitha kunobumnandi obuncane. Imikhiqizo enemibala emnyama kancane, iphunga elibi noma ukunambitheka okungajwayelekile akufanele ithengwe!
Inani? Ingabe izingane kufanele ziphuze ubisi ukuze zikhulise ukuphakama kwasekhaya?
Akuwona wonke imigqa yobisi ebizayo esiza izingane ukuba zikhule. Ukuze umntwana akhule ngokufanele ngobude nangesisindo lapho esebenzisa ubisi, umama udinga ukukhetha ubisi olufanele lomntwana, ukuze ashukumise umntwana ukuba adle kahle.
Uma umkhaya ungacebile ngokwezomnotho, omama bangakhethela izingane zabo ubisi lwasekhaya olunedumela elihle nelibiza ngokunengqondo. IVietnam inezinhlobo eziningi zobisi ezidumile ezinemigqa yobisi lwezingane ethuthukiswe ngokuphelele njengeNutricare, Nutifood, ….
Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokuphakama kwasekhaya zuza ubisi lwesisindo, okuthenjwa omama abaningi i-Care 100 Gold milk, Care 100+ milk of Nutricare. Lawa womabili amabisi afakazelwe ngokomtholampilo ukusiza ingane yakho ukuba ibe nesisindo nobude ngemva kwezinyanga ezi-2 kuphela yokusetshenziswa:
I-Care 100+: Ubisi lwezingane ezinesisindo esiphansi sokuzalwa, i-anorexia, i-malabsorption, ukungondleki – Buka imininingwane
I-Care 100 Gold: Ezinganeni ezingondlekile, i-anorexia, izingane ezidinga ukwengeza amandla amaningi amaprotheni ekudleni.
Uma uzibuza ukuthi yiluphi ubisi lokukhulisa ubude olulungele ingane yakho, ungabheka imikhiqizo emi-2 ethengiswa kakhulu ye-Nutricare!
Ngalesi sihloko, ngokuqinisekile wonke umuntu angaphendula umbuzo wokuthi ukunikeza izingane ubisi ukwandisa ukuphakama! Sethemba ukuthi ukwaziswa okukulesi sihloko kuzosiza omama ekunakekeleni izingane zabo.
Xem Thêm Review top 10 sản phẩm thuốc trị mụn đầu đen hiệu quả nhất. | Muasalebang
Top 7 loại Xịt chống muỗi cho bé theo độ tuổi tốt nhất năm 2022 | Muasalebang
Hướng dẫn tư thế đạp xe đúng cách, không đau lưng | Muasalebang